समाज Archives - Page9of 223 - Dna Nepal
भाइटीकाको शुभसाइत कात्तिक १२ गते ११ः५५ बजे ३ कार्तिक २०७६, आईतवार ०९:४६
काठमाडौं, कार्तिक ३ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको भाइटीकाको शुभसाइत सार्वजनिक गरेको छ । समितिले तिहारका विभिन्न पर्वको निर्णय गर्दै भाइटीकाको साइत सार्वजनिक गरेको अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले राससलाई जानकारी दिए..
काठमाडौं, कार्तिक ३ । पश्चिमी वायुको प्रभावले मुलुकभरको मौसममा सामान्यदेखि पूर्णबदली आएकाले देशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावनासमेत रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आइतबार देशभर सामान्य बदली रही मध्य र पूर्वका थोरै..
हितैशी सहकारीको सातौं स्थापना दिवसका अवसरमा विद्यार्थीलाई पोशाक वितरण
पोखरा, कार्तिक ३ । पोखरा १६ अर्मलामा रहेको हितैशी वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पोशाक वितरण गरेको छ । संस्थाले आफ्नो सातौं स्थापना दिवसको अवसर पारेर १४ जना विद्यार्थीलाई पोशाक वितरण गरेको सचिव विष्णु प्रसाद..
ढोरपाटन शिकार आरक्षमा पहिलो यामको सिकार सिजन सुरु
बाग्लुङ, कार्तिक ३ । मुलुककै एक मात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटन शिकार आरक्षमा पहिलो यामको सिकार सिजन सुरु भएको छ । हरेक वर्ष असोजदेखि मंसिरसम्म हुने पहिलो सिजनको शिकारयाम सुरु भएको हो । वर्षेनी दुई सिजनमा सिकार अनुमति दिइने आरक्षमा यो वर्षको..
नेपालको अनौठौ परम्पराः विहे गर्दा दाइजोमा भालु र सर्प, अंशमा पनि भालु
काठमाण्डौं, कार्तिक ३ । विवाह कर्ममा छोरी पक्षले सामान्यतया गरगहना र लत्ताकपडा दिने चलन छ । कानुनतः दाइजो लेनदेन गर्न नपाइने भए पनि व्यवहारबाट चलन अझै हटिसकेको छैन । तराईमा दाइजोमा नगदसँगै सवारी साधनसम्मको माग गरिन्छ । तर, तराईमै बसोबास गर्ने..
पोखरा स्टिल फेव्रिकेटर्सको अध्यक्षमा ऋषि गिरी २ कार्तिक २०७६, शनिबार १५:३६
पोखरा, कार्तिक २ । पोखरा स्टिल फेव्रिकेटर्स एशोसियसन कास्कीको अध्यक्षमा ऋषि गिरी निर्वाचित भएका छन् । शनिबार भएको १९ औं साधारणसभा तथा तेह्रौं अधिवेशनबाट गिरीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो । समितिको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा विश्व..
काठमाडौं, कार्तिक २ । पश्चिमी वायुको प्रभावले देशभर आङ्शिकदेखि सामान्य बदली भई चिसो बढ्दै गएको छ । उक्त वायुको प्रभावले आज देशका उच्च पहाडी भू–भागका केही स्थानमा हल्का हिमपात र पहाडी भेगका केही स्थानमा क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको..
१३ वर्षीया बालिकाको सामूहिक बलात्कार, ७ जना पक्राउ
सुर्खेत, कार्तिक २ । सुर्खेतमा एक १३ वर्षीया बालिकालाई ७ जनाले सामुहिक रुपमा पटक पटक बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार असोज १५ र १६ र २३ गते उनी बलात्कारमा परेकी हुन् । एक पटक ४ जनाले र एक पटक २ जना गरी..
तरकारीमा विषादी न्युनिकरणका लागि कृषकको आक्रर्षण, कार्यक्रम थप गर्न माग १ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १३:१४
पोखरा, कार्तिक १ । तराकारीमा रासायनीक विषादी न्युनिकरण गर्नका लागि कृषकलाई तालिम प्रदान गर्दै आएको कारितास नेपाललाई कार्यक्रम थप गर्न माग गरिएको छ । कारितास नेपालले पोखरामा आयोजना गरेको वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा कार्यक्रम थप गर्न माग..
जुवाडे र विचौलियाको घेरामा कास्की प्रहरी !
पोखरा, कार्तिक १ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जुवाका खालहरुमा चलाएको अप्रेशनहरु मध्येको पछिल्लो एउटा घटनाले कास्की प्रहरीलाई विवादित बनाएको छ । गत आइतबार कौडा खेलिरहेका अवस्थामा एक रेष्टुरेराँबाट १५ जना जुवाडेलाई कास्की प्रहरीले..